Ukuphupha itshokholethi Discover ▷ Discover online ▷ ➡️
Kubantu abaninzi, itshokholethi sesona silingo simnandi. Nokuba isiqwenga esincinci esinyibilikayo kancinci kulwimi lwakho sinokukubeka kwimeko yokunxila ngokupheleleyo, kwaye ngokuqinisekileyo akunjalo ngenxa yeswekile eninzi. Nokuba uphando luyavuma ukuba uxinzelelo lwezinto ezikhuthaza ulonwabo kwitshokholethi ziphantsi kakhulu ukuba zingabinampembelelo ebalulekileyo, siziva sonwabile emva kokunandipha iqhekeza okanye ibha.
Zininzi izihlandlo zokonwabela itshokholethi: nokuba nguSanta owenziwe ngetshokholethi phantsi komthi IKrismesi, umvundla omnandi we-Ista, itshokolethi emnandi embindini okanye itshokholethi yokusela ngaphambi kokulala, itshokholethi ihlala ithandwa kwaye inabalandeli abaninzi.
Kodwa lithetha ntoni iphupha malunga netshokholethi kuthi? Ngaba oku kubonisa nje ukulangazelela kwethu itshokholethi, njengoko okwangoku singazibandakanyi el mundo yomlindo? Ngaba eli phupha lenzeka kuphela xa usekutyeni?
1 Uphawu lwephupha «itshokholethi» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «itshokholethi» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «itshokholethi» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «itshokholethi» - ukutolikwa ngokubanzi
Isimboli yephupha "itshokholethi" ibhekisa kwinkcazo yeli phupha ngokubanzi. isilingo kwihlabathi elivukayo. Oku kunokuvela ebantwini nakwizinto. Nangona kunjalo, kwangaxeshanye, itshokholethi ephupheni inokubonisa ukomelela kunye nempilo. Ukuba umphuphi wayefuna ukutya itshokholethi ephupheni lakhe, kodwa ikhalori ephezulu okanye umxholo weswekile uyamthintela ekwenzeni njalo, le meko yephupha kufuneka imenze azi ukuba kude kube ngoku uxhathisile isilingo sokuvuka ebomini kwaye akayekanga.
Umbono wetshokholethi ephupheni ubonakalisa ukuba likhoboka lokutya ngokubanzi eliqwalaselwa lingathathelwa ngqalelo ebomini bokuvuka. Iphupha kufuneka lahlukane nezi kwixa elizayo.
Ukutya okanye ukusela iitshokholethi njengophawu lwephupha kuzisa zombini Suerte y butyebi kunye nempilo kunye namandla kunye naye. Ukuba itshokholethi ibonakala kulowo uphupha ephupheni ukuba ithambile, inesidima kwaye imnandi kakhulu, ubomi bakhe kwihlabathi elivukayo lilungile.
Nangona kunjalo, ukuba itshokholethi inekamva elimuncu, umphuphi uyaboniswa ukuba akakaqhubeki namava athile. Ukuba iphupha lifumana itshokholethi njengesipho ephupheni, umntu olinikayo ungumhlobo olungileyo kwihlabathi elivukayo. Ukuba kwelinye icala ukuphupha kukunika itshokholethi kwiphupha lakho, ungathanda ukweyisela umntu othile kuwe.
Iibhokisi zeetshokholethi njengophawu lwephupha elibonisa ikhosi ehambelanayo yeshishini. Itshokholethi emnyama ephupheni luphawu, ngokutolikwa ngokubanzi kwamaphupha. Ukuphoxeka. Itshokholethi eyenziwe ngecocoa okanye itshokholethi emhlophe njengophawu lokulala ibonisa imeko yezempilo ebuthathaka. Ubisi itshokholethi ephupheni kungekudala uthembisa izipho zamaphupha.
Ukuba iphupha libona itshokholethi yetruffle ephupheni lakho, ufumana uphawu lokuba uzibona uyinto ekhethekileyo ebomini bokuvuka. Ufuna abanye babubone ubuchule bakhe obukhulu. Ukuba isimboli yephupha "itshokholethi" ibonakala njenge-ayisi khrim ephupheni, oku kuthathwa njengophawu lwentshukumo engenamsebenzi. Umphuphi kufuneka aqwalasele ngenyameko isenzo sakhe kwihlabathi lokuvuka.
Iibhola ze-chocolate ze-marzipan ephupheni zihlala zizisa ixesha lokonwaba kunye nazo. I-chocolate kunye ne-marshmallows ingabhekisela kwicala elihle lobomi njengomfanekiso ophuphayo, onokuyonwabela kungekudala.
Uphawu lwephupha «itshokholethi» - ukutolikwa kwengqondo
Ukutolikwa kwengqondo kwamaphupha kutolika uphawu lwephupha "itshokholethi" njengomnqweno wokuphupha omnye. ngengqondo y amalgam yomzimba nomntu omthandayo. Ukuphupha kufuna ukuseka obona buhlobo bunokwenzeka neqabane lakho okanye omnye umntu omthandayo.
Nangona kunjalo, ukuba iphupha ngoku likukutya kwilizwe elivukayo kwaye ke uphawu lwephupha "itshokholethi" iyavela, oku kubonwa ngokwengqondo njengophawu lokulangazelela ulonwabo olungalawulekiyo. I-chocolate ayinyanzelekanga ukuba ibe lukhetho lokuqala, kodwa endaweni yoko iphupha libhekisa kukonwaba okungaphazanyiswanga kwesitya esithile.
Uphawu lwephupha «itshokholethi» - ukutolika kokomoya
Kwinqanaba lokomoya lokuchazwa kwephupha, iphupha lifumana ngesimboli yephupha "itshokholethi" isibonakaliso sokuba kuvuswa into ebomini. zivuze Ndingathanda.